Ciidamada Nigeria ee qeybta ka ah AMISOM oo aan wax mushaar helin muddo hal sanno ah.
136 Sarkaal Nigerian oo ka tirsan Unugga Boliska ee Somalia (Formed Police Unit (FPU) in Somalia, ayaa weli rajeynaya in la siin doono mushaarkooda, kadib, markii ay dhamaysteen Hawlgal ay muddo Hal sanno ah u joogeen Somalia.
Saraakiishaasi oo la hawl-galayey Hawlgalka AMISOM ayaa waxa uu jadwalku ahaa inay Dowladaha Midowga Europe (The European Union (EU) bixiyaan Mushaaraadka iyo Gunnadda Saraakiishaasi u dhalatay dalka Nigeria oo iyagu u xil saarnaa inay qoraan, isla markaana tababaraan Ciiddanka cusub ee Boliska Somalia.
Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Caasimadda dalka Nigeria ee Abuja oo aan ka soo xiganay Warkan ayaa qoray in halkii 136-da Sarkaal laga siin lahaa Mushaarkooda in laga wada safay Billado Abaalmarin Hawlkarnimo oo ay ku muteysteen sida ay u guteen Waajibaadkooda muddadii ay joogeen Somalia.
Wargeyska waxa kale oo uu qoray in inta badan Saraakiishaasi bilaabeen inay dawarsadaan, si ay ugu iibsadaan Adeegyadda muhiimka u ah, waxayna dareemayaan awood la’aan ka dhalatay Mushaar la’aanta ku haysata Hawlgalka AMISOM.
Mid ka mid ah Saraakiisha Boliska Nigeria ee ku sugan Somalia ayaa u sheegay Wargeyska The Nation inaysan xaalladaasi wax niyad-jab iyo saamayn ah ku yeelanin Hawlgalka ay u joogaan Somalia.
Waxa uu intaasi ku daray in Saraakiishooda loo aqoonsaday Ciiddanka Boliska ee ugu wanaagsan ee ka tirsan Hawlgalka AMISOM, isla markaana ka shaqeeyey Qaabaynta Ciiddanka Boliska Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, Cabashadda Mushaar la’aanta haysata Ciiddanka AMISOM ayaa noqotay mid saamayn xooggan ku yeelan karta Hawlgalka AMISOM.
Dowladda Burundi oo ay Somalia ka joogaan in ka badan 5,300 Askari ayaa ku hanjabtay inay Ciiddankooda la bixi doonaan, iyadoo aan Ciiddankaasi wax mushaar ah la siinin muddo 12-bilood ah.
Madaxweynaha dalkaasi, Pierre Nkurunziza ayaa horey ugu goodiyey inay Ciiddankiisa kala soo bixi doono Hawlgalka AMISOM, wuxuuna eedeyn u jeediyey Midowga Afrika iyo Midowga Europe oo uu ku tilmaamay inay ka mas’uul yihiin mushaar la’aanta Ciiddankiisa ku haysata Somalia.
Tan iyo bishii March ee sannadkii hore, Askarta Burundi ee qeybta ka ah AMISOM ma helin wax mushaaraad ah, waxaana arrintaasi loo aanaynayaa Khilaafka Siyaasadeed ee u dhexeeya Midowga Europe iyo Dowladda Burundi, kadib, markii Madaxweyne Pierre Nkurunziza mar 3-aad loo doortay Xilkaasi.